के अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठ रियलमा नै जोडी बन्दै छन् ? यस्तो छ बास्तबिकता – Enepali Samchar
के अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठ रियलमा नै जोडी बन्दै छन् ? यस्तो छ बास्तबिकता
November 19, 2020 adminLeaveaComment on के अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठ रियलमा नै जोडी बन्दै छन् ? यस्तो छ बास्तबिकता
काठमाडौ । नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई दर्शकले निकै मन पराएका छन् । संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूजा र आकाशले दर्शकका कारण दर्शककै लागि आफूहरु एकसाथ रहेको बताएका छन् ।